လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အတွက်သိကောင်းစရာများ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / အဆိုပါလေ့ကျင့်ခန်းချွန်ဖို့သိကောင်းစရာများ
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-31 မူလ:ဆိုက်ကို
နေ့စဉ်ဘဝ၌ t ကိုWist Darration တစ် ဦး အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်ဒါတွင်းတူးခြင်းစွမ်းအားတန်းဆာကိရိယာရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ။ဒီတော့ sလေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းသည်အလုပ်ခွင်၏အပြောင်းအလဲအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်, သို့သော်၎င်းသည်ချွန်ထက်ရန်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါတူးလေ့ကျင့်ပါဝါ tool ကို၏. ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်လေ့ကျင့်ခန်းကိုချွန်ဖို့အကြံပြုချက်များကိုပြောပြလိမ့်မည်။
ငါတို့သိတယ်tWist Darkပါဝါ tool ကို ဖြစ်မကြာခဏနေ့စဉ်ဘဝ၌အသုံးပြုခဲ့သည်။ကြိတ်ခြင်းမပြုမီစွမ်းအားDrill Bit,လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်း၏အဓိကဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းနှင့်ကြိတ်သောဘီးမျက်နှာပြင်ကိုအလျားလိုက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နေရာချသင့်သည်ပြောရန်,သင် ... ရမည်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းသည်ကြိတ်သောဘီးမျက်နှာပြင်ကိုဆက်သွယ်သောအခါအစွန်းတစ်ခုလုံးသည်မြေကြီးပေါ်တွင်ရှိသည်။ ဤသည်လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်းနှင့်ကြိတ်ဘီး၏ဆွေမျိုးအနေအထားအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အနေအထားကိုသတ်မှတ်ပြီးထို့နောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြိတ်ဘီး၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တဖြည်းဖြည်းပိန်လျက်ရှိသည်၏ Rotary Drilt tool ။
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, t ကိုသူကစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏ရှေ့ထောင့်ထောင့်သည်ထက်မြက်နေစဉ်အတွင်းအရေးကြီးသော parameterster တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီထောင့်ကမမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်း၏ထိပ်ထောင့်၏အရွယ်အစားနှင့်အဓိကဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်း၏ပုံသဏ္ of ာန်နှင့်စောင်အစွန်း၏ bevel ၏ပုံသဏ္ of ာန်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ Drill Bit Axis Line နှင့်ကြိတ်သောဘီးမျက်နှာပြင်အကြားရှိအနေအထားဆက်နွယ်မှုသည် 60 ဒီဂရီသာရှိသည်။ ဒီထောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးတိကျသည်။ ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဆွေမျိုးအလျားလိုက်အနေအထားကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ နှစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။
ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းသည်ကြိတ်သောဘီးကိုထိပြီးနောက်၎င်းသည်အဓိကဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းမှမြေပြင်ဖြစ်သင့်သည်ပြောရန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းသည်ကြိတ်စက်ကိုထိလာပြီးနံရံတစ်ခုလုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းကျသွားသည်။ Drill Bit ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါပထမ ဦး ဆုံး crinding ဘီးကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ထိမိနိုင်ပါတယ်ly ခင်ဗျားတို့သင့်သေးငယ်သောပမာဏကိုပိုမိုသေးငယ်သောပမာဏကိုလုပ်ဆောင်ပြီးမီးပွား၏ယူနီဖောင်းကိုဂရုပြုပါ, လက်ထဲတွင်ဖိအားကိုအချိန်မီညှိပါ။ ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်း၏အပူချိန်မြင့်မားသောအခါ,လိမ်တူးလေ့ကျင့်အချိန်အတွက်အအေးသင့်ပါတယ်။
စံအရေးယူမှု၏လက်လေ့ကျင့်ခန်း Rotary Tools များ အဓိကဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းသည်ကြိတ်စက်ပေါ်သို့တက်ပြီးဆင်းသွားသည်ပြောရန်Drill Bit ၏ရှေ့ဘက်တွင်ကိုင်ထားသည့်လက်ကိုကိုင်ထားသည့်လက်သည်အလွယ်တကူတူးဖော်ခြင်းကိုအလွယ်တကူလွှဲပြောင်းပေးရမည် ၏မျက်နှာပြင်ကြိတ်ဘီး။ သို့သော်လက်ကိုင်ကိုင်ထားသည့်လက်သည်မလွှဲနိုင်ပါ။ နောက်ဘက်ကိုအထက်သို့တင်ခြင်းမှတားဆီးရမည်နှင့်၏အမြီး လက်ကိုင်တူးလေ့ကျင့် ကြိတ်သောဘီး၏အလျားလိုက်စင်တာလိုင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစောင်းကိုမထားနိုင်ပါ။ ဤသည်အများဆုံးအရေးအကြီးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်အရာဆုံးဖြတ်သည် ၏အရည်အသွေးလိမ်တူးလေ့ကျင့်.အဆိုပါ Sharpening နီးပါးပြီးဆုံးသွားသောအခါဓါးသွားအစွန်းမှ စတင်. ဓါးသွားချောမွေ့စေရန်နောက်ကျောထောင့်ဆီသို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပွတ်ပေးပါ။အခုတော့twist လေ့ကျင့်ခန်း bits ဓါး ကောင်းစွာသိသိသာသာခဲ့သည်။
တူးဖော်ခြင်းပါဝါကိရိယာကိရိယာ ပါဝါ tool ကို၏တူးရပ် လှည့်ကွက်လေ့ကျင့်ခန်းပါဝါ tool ကို Rotary Dark tool twist လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်း Mini Hand Darrary Rotary Tools များ လက်ကိုင်လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်း Twist လေ့ကျင့်ခန်း၏အရည်အသွေး twist လေ့ကျင့်ခန်း bits ဓါး ပါဝါလေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်း